အမျိုးသမီးရောဂါဆိုင်ရာ (အဖြူဆင်းခြင်းအကြောင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အမျိုးသမီးရောဂါဆိုင်ရာ (အဖြူဆင်းခြင်းအကြောင်း)
Posted by AKKO on Feb 1, 2012 in Health & Fitness, Short Story | 24 comments
ဒီတစ်ခါတော့ ပျိုပျိုမေတို့ အတွက် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး ဆေးရုံဆေးခန်းပြဖို့ အချင်းချင်းတိုင်ပင်ဖို့ မ၀ံ့မရဲဖြစ်တဲ့ရောဂါလေးအကြောင်းဆွေးနွေးပြောပြပေးပါမယ် ။
အမျိုးသမီးများအဖြစ်များပြီး ဝေဒနာကြာရှည်စွာခံစားနေရာမှ ဆေးခန်းရောက်လာလို့ ဒီပို့ စ်လေးရေးဖြစ်တာပါ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ခံစားနေကြရတာ အဖြူဆင်းလို့ တဲ့ ။ မပြောရဲပဲ ငြိမ်နေတာကြောင့် မပျောက်ပဲ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေသူများလည်း ရှိပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အဖြူဆင်းတယ်။ယားယံပါတယ်ဆိုသူများအတွက်ပါပဲ ။
ဒီပြသနာ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် infection ကြောင့်ပါ။ candida albicans= မှိုကြောင့်နဲ့trichomonas vaginalis= ပရိုတိုဇိုးဝါး(protozoa) ကြောင့် ဖြစ်ရတာ 90%လောက်ရှိတယ်။
Candida infections (မှို ) ကြာင့်ဆိုရင် ဝေဒနာရှင်က တော်တော်ကြီးယားယံမယ်၊နီရဲနေမယ်၊ညနေပိုင်းနဲ့ ညပိုင်းမှာပိုဆိုးပါတယ်။ နွားနို့ မလိုင်ဖတ်တွေလိုပဲ မိန်းမကိုယ်မှာ အဖြူဖတ်တွေ ကပ်နေမယ်။
မိန်းမကိုယ်၊မိန်းမကိုယ် နှုတ်ခမ်းသားသေးမှ စအိုဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိ၊ဆိုးရင် ပေါင်အထိ အင်ပြင်ထသလို နီရဲထူပြိန်းနေမယ်။ အဲ့ဒီလို သွင်ပြင်တွေပါ ရောထွေးခံစားရပြီး တစ်ခါတစ်ရံ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း infection ပါ တွဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ဗိုက်အောင့်တာတို့ ၊အန်တာတို့ ၊ဗိုက်ရစ်တာမျိုးတို့ ပေါ့။
ဒီပြသနာက အပျိုကြီးတွေကစလို့ အပျိုလတ်၊ အပျိုဟိုင်း ၊ အန်တီကြီး ၊ အမယ်အိုကြီးတွေထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာ commonest infection အဖြစ်များဆုံးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့၁၅-၂၀% လောက်ရှိပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့ အခြေနေတွေများစွာရှိပေမယ့် အမျိုးသမီးများ ရာသီမလာခင်အချိန်ဖြစ်ရင် ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက ပိုဆိုးတယ်။ ဆီးချို၊သွေးချို နဲ့သွေးအားနည်းရောဂါတွေဖြစ်ရင် ပို ဖြစ်နိုင်တယ်။
တားဆေးတွေ၊အစွမ်းထက်ပိုးသတ်ဆေးတွေ၊စတီးရွိုက်တွေ၊ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဖိနှိပ်ထားတဲ့ဆေးမျိုးတွေ သုံးနေသူတွေဆိုရင် ပိုဖြစ်စေတယ်။ အထူးသဖြင့် အတွင်းခံ အကျပ်တွေဝတ်ရင်၊ဘောင်းဘီအကျပ်တွေ ၀တ်လွန်းရင်လည်း ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသိထားဦးနော်။
မှိုသတ်ဆေး တွေပေးရင်ပျောက်တယ်။ဆေးမတိုးရင် နောက်ဆုံးထွက်ဆေးတွေပေးရတယ်။အဲဒီဆေးတွေက အသည်းမကောင်းရင် မသောက်ရဘူးနော်။ နောက် မိန်းမကိုယ်ကို ရေချိုးရင် ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးလို့ ရတယ်။genital hygiene လေ။ အရမ်းကျပ်တဲ့ ဘောင်းဘီတွေရှောင်၊ heat control လုပ်ချင်ရင် လျှော်ရင်လည်း >80ံC မှာလျှော်ပေါ့။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း သူများကြပ်တာနဲ့ ကြားဖူးနားဝ လျှောက်လုပ်ရင်း အရက်ပျံနဲ့ဆေးကြတယ်တဲ့ ။ ယနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သီးသန့်ဆေးရည်တွေပေါ်နေပါပြီ ခက်ခက်ခဲခဲ ခေါင်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူး ။
Trichomonas Infection ကြောင့်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံတာကြောင့်ရယ်၊ကူးစက်ထားတဲ့ ။ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုမရှိပဲ သူများ ဘောင်းဘီတွေယူဝတ်ကြတာကြောင့် ဖြစ်ရတာ။ သူ့ကြောင့်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေထဲအများစုကတော့ ယားမယ်၊ပူလောင်နေသလိုဖြစ်နေမယ်။
အဖြူဆင်းရင်အနံ့ ဆိုးမယ်၊အဖြူမဟုတ်ပဲ အစိမ်းရောင်၊အညိုရောင်ဖြစ်တတ်တယ်။
မိန်းမကိုယ်ကြည့် မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်ရင် စတော်ဘယ်ရီ စပေါ့ လို့ ခေါ်တဲ့ အနီရင့်ရင့်အစက်လေးတွေတွေ့ ရမယ်။
ဂနို(ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ) infection နဲ့ လည်းတွဲဖြစ်တတ်တာကြောင့် ဂနိုပါတွဲ ကုရမယ်နော်။
ပရိုတိုဇိုးဝါး(protozoa) သတ်ဆေး ပေးရင်ပျောက်တယ်။ဒီဆေးသောက်ရင် alcohol တော့ရှောင်ရတယ်။
ထပ်ဖြစ်ရင် နဂိုအတိုင်း ပြန်သောက်ရမယ်နော်။ တစ်ခါဖြစ်ပြီးလျှင်လည်း တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု အားနည်းလျှင် ထပ်ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပါပဲ ။
အချင်းချင်းဖွင့်ဟမတိုင်ပဲရဲကြတဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါထဲက အဖြူဆင်းခြင်းရောဂါအကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ အချိန်မရလို့အဓိကအချက်တွေ ပဲပြောရတာပါ။
သိလိုသည်များကို ဆက်လက်မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် ။ ရွာသူတို့လည်း တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအလေးကာ အဖြူဆင်းခြင်းကို ကာကွယ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။
နွားနို့မလိုင်ဖတ်တွေလိုဘဲဆိုတော့ တော်ပြီ နွားနို့သောက်တော့ဘူး နွားနို့ကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှ
အယ် အခုနွားနို့သောက်နေတာ ဟယ် မလိုင်ဖတ်တွေ
မိန်းမကိုယ်ကြည့် မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်ရင် စတော်ဘယ်ရီ စပေါ့ ဆိုတော့ လေးပေါက်တော့ သွားပါပြီဗျ
စတော်ဘယ်ရီက လေးပေါက် လိုဂိုရှင့်
အတော်များများ ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ ရောဂါ အမျိုးစားထဲကပေမယ့် …. လူသိရှင်ကြား သိချင်တာ ဆွေးနွေးဖို့ နဲ့ ကော့မန့်ရေးဖို့ကတော့ …. ရှက်စိတ်နဲ့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ …. ။
ဆရာဝန်ကြီးခင်ညာ.. အဲ့ဒီလို ဗဟုသုတတွေ များများရေးပေးဖို့
တောင်းဆိုပါတယ်…။ လူသိများတဲ့ ရောဂါတွေထက်
လူတွေ ရှက်စိတ်နဲ့ အုံပုန်းကြိတ်ခံနေတဲ့ ရောဂါတွေရေးပေးတာက
ပိုပြီး ဗဟုသုတဖြစ်စေသလို… ပိုပြီးလည်း ဂရုစိုက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ည..
ရွာသူအများစုက ရှက်စိတ်ပိုကြတယ်… ဆရာဝန်ကြီး စာကိုဖတ်ပြီး
ကွန့်မန့်ပေးဖို့ တော့ လက်တွန့်နေမယ်ထင်တယ်…
မီးမီးရှက်ရှက်… ဟီးးး :cool:
ဗဟုသုတ အလို့ ငှာ မှတ်သားသွားပါရဲ့ ဒေါင်တာ
နောက်လဲ ခုလို ကျန်းမာရေးဗဟုသုတလေးတွေ မျှော်နေလျက်
ကပေါက်ဖော် ….အဲ .. ဒေါ်ပေါက်ဖော် …. အသက်ရွယ်မရွေးဖြစ်သတဲ့နော် .. ဟဲဟဲ … နှစ်ခါ သုံးခါ ပြန်မ၀တ်နဲ့ … သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပါ …. ဟီဟီး
ကိုပေါက်ကြီးရဲ့ လိုဂို စတော်ဘယ်ကိုပြောတာ မဟုတ်ရပါဘူး ဖရဲသီးလေးရေ ။ ရောဂါဗေဒ ဘာသာရပ်ကများသောအားဖြင့် အစားသောက်တွေရဲ့ နာမည်အတိုင်းမှည့်ခေါ်တာများတယ်လေ ။ ဥပမာ- ဂျယ်လီ ၊ ပုန်းရည်ကြီး ၊ ဆန်ဆေးရည် စသဖြင့် မြင်သာအောင် ဥပမာနဲ့ မှည့်ခေါ်ကြတယ် ။
ကိုရင်စည်သူ ခင်ဗျား အမျိုးသမီးတွေတင်မကပဲ ၊ အမျိုးသားများပါ သိထားတဲ့အခါ မိမိဧ။် ကောင်မလေးကိုလည်း ပရင့်ထုတ်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ပါတယ်
စိန်ပေါက်ပေါက်ဆိုလျှင်တော့ alcohol သောက်လို့ ရပေမယ့် ဒေါ်စိန်ပေါက်ဆိုလျှင်တော့ ဒီအချိန်မှာ alcoholရှောင်ရမယ်နော့ ဟဲဟဲ
အဖြူဆင်းတယ်ဆိုရင် တစ်ချို့က သာမာန်ပဲ သဘောထားတတ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာကရှင်းပြတော့လည်း အားလုံးသဘောပေါက် ဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးနည်းနဲ့ တော့
တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံး ၆+၂၁ ကို တစ်ကြိမ် နံနက်ကို ရေအေးနဲ့တစ်ကြိမ်သောက်
နေ့လည်ကို တိုင်းရင်းဆေးအမှတ် ၁၇ကို ၅ပြားတစ်ကြိမ် ရေနွေးနဲ့သောက်
ညနေကို (၁၅) ၅ပြား ရေအေး၊ အချိုရည် တခုခုနဲ့ တစ်ကြိမ်သောက်
ညကိုတော့ ၁၂(စက္ခုပါလ) ၅ပြား ရေအေးနဲ့ သောက်ရင် ရပါတယ်။
နောက် ၄၃ကို ဆီးခုံးတစ်ဝိုက် ရေနဲ့ လိမ်းပေးရင် ရပါတယ်။
ကြုံလို့ တိုင်းရင်းဆေးလေးပြောပြတာပါ နှစ်သက်သူတွေ သုံးလို့ရတာပေါ့။
ဒီဆေးတွေကို ရန်ကုန် ကုန်ဈေးတန်း မှာ မေးဝယ်လို့ လွယ်ကူစွာ ရပါတယ်။
ဓမ္မတာလာခါနီးကိုက်ခဲနာကျင်တတ်သူတွေလည်းဒီဆေးကို သောက်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ကြိုဆိုပါတယ် ဆရာထက်ဝေးရေ ။ အင်္ဂလိပ်ဆေးတင်မကပဲ မြန်မာဆေးသုံးချင်သူများအတွက်လည်း အကျိုးများစေပါတယ် ။
ကျန်းမာရေးအသိဖြန့်ဝေခြင်းမှာ ပါဝင်ဖြည့်စွပ်ပေးတာ များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မီးမီး မှတ်သားသွားပါတယ်ချင့် ..
မီးမီးတို့ကို ဗဟုသုတ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးချူးပါချင့်
အဲဒီအတွက်လည်း တိုရင်သာအေးက မီးမီးကိုဘာမှ မပြောပြဘူးချင့်
အခုတော့ မီး တိတွားလုိ့ ဆင်ခြင်လို့ရပါပြီချင့်
ဂျမ်းပုံ (ခေါ်) မီးမီး
(မှတ်ချက်။ ဤစာအား ဂျမ်းပုံမရေးရဲသည့်အတွက် သူ့ကိုယ်စားရေးပေးလိုက်ပါသည် … … ထို့အပြင် ဤစာအား သတ်ပုံအသင်း စစ်ဆေးခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားအပ်ပါသည်) …
ကျွန်တော် ဒီပိုစ့် နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး ဗဟုသုတ သိချင်တာလေး ရှိလို့ မေးမယ်နော်
AIDS အကြောင်းပါ AIDS ကဘယ်လို ကူးစက်တတ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်သိပါတယ်
ဒါပေမယ့် ခြင် ကနေ မကူးစက်ပါဘူး၊ ဆေးထိုးအပ် ကနေ ကူးစက်ပါတယ်၊ ခြင်ကလဲ လူ ဆီက သွေးကို စုပ် ပါတယ်၊ ဆေးထိုးအပ်ကလဲ စုပ်ပါတယ်၊ အဲဒီနေရာလေးကို မရှင်းတာပါ၊ အဲဒီလို ဆိုရင် AIDS ရောဂါရှင်တွေက ခြင်တွေကို စားရတော့မလို ဖြစ်နေပြီလား ဟင်၊
နောက်တစ်ခုက AIDS ဆေးဝါးတွေပါ ဆေးကောင်း တွေက အသက်ကို ကြာကြာ ပိုနေနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် ၊ အဲဒီလိုဆိုရင် အဲဒီဆေးက ရောဂါ ပြန်ပွါးအောင် လုပ်ပေးသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်၊
ဂရုဏာ မရှိလို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရောဂါရှင်တွေက ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ် မသိတတ်ကြလို့ပါ။။
သိတဲ့သူများ ရှိရင် ပြောပြပေးကြပါနော်….
ဒီလို သိသင့်တဲ့ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါဗဟုသုတ တွေ ကတော့ သိထားလေကောင်းလေပါဘဲ။
တစ်ချို့လဲ ကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင် မသိဘူး။
ဒါမျိုး ဟာရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ လေ့လာမှတ်သား ရမှာပါ။
ဒီလို မျိုး Post လေးတွေ ဆက်ပြီး ရေးပေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ် AKKO ရေ။
AKKO လို့ တွေ့တိုင်း YKKO ကိုသတိရမိတယ်။ ;-)
များများရေးပါ ကိုAKKOရေ အလှအပကျတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများရှိသေးတယ် …
ညီလေးမောင်ကင်းရေ ဂျမ်းပုံ (ခေါ်) မီးမီးကိုလည်းပြောလိုက်ပါဦးနော် မျက်နှာတစ်ကွက်စာလှဖို့အပြင် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကလည်း လိုအပ်တာကြောင့် လူမြင်တဲ့နေရာရော ၊ မမြင်တဲ့နေရာကိုပါ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပါလို့
ကိုချစ်ရင်ထူးခင်ဗျ AIDS အကြောင်းမေးထားတာလေးကို ကော့မန့်အနေနဲ့ရေးတာထက် အရမ်းရှည်လွန်းလို့ ပို့စ်အနေနဲ့ ရေးပေးပါဦးမယ် ။ AIDS ဆေးဝါးတွေကြောင့် သူတို့တွေ သက်တမ်းပိုနေရပြီး တခြားလူတွေကိုပါ ရောဂါဖြန့်နေသလိုဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူတို့တွေမှာ ရှိသင့်တဲ့ရောဂါ ကူးစက်နည်းတွေ၊ ကာကွယ်ပုံတွေကို သေချာ မသိလို့ ဖြစ်ရတာပါ ။ တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ့်မှာ ရှိတာ သိလျှက် တခြားလူတွေကိုပါဒုက္ခမျှဝေသွားသေးတယ် ။ အဲ့ဒီလို လူတွေ ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး
အရီးလတ်ရေ မိန်းကလေးတွေ အနေထိုင် ၊ အ၀တ်စားသာ ရဲတင်းပွင့်လင်းလာကြပေမယ့် ဒီလို ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေကိုတော့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မဆွေးနွေးရဲကြသေးဘူး ။ တချို့ ဆေးခန်းလာတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ကောင်မလေးတွေ တားဆေးလာထိုးကြတယ် ။ တားဆေးထိုးချင်လို့ ဆိုတာလေးလောက်ကို ပြောပြဖို့ အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်မပြောပဲ ဘေးက ပါလာတဲ့ ယောကျာ်းဖြစ်သူကို တတောင်နဲ့ တွတ်ပြီး ပြောခိုင်းတယ် ။ ကဲ ဒီစကားလေးပြောဖို့တော့ ရှက်သလားဗျာ ။ အိမ်ထောင်သည်တောင် ဒီလောက်ရှက်နေတာ လူလွတ်တွေဆို ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ ။
ညီမ မိုးစက်ရေ ဗဲရီးဝဲလ်ကမ်းပါ ။ ဒီပို့စ်ထဲ လူငယ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ ပထမဆုံး ၀င်ဆွေးနွေးရဲတဲ့ သူမို့လို့ပါပဲ ။ပထမဆုံးဆိုတာကတော့ ဒီလိုပါ etone ကတော့ ကျန်းမာရေးစာဆောင်တွေကနေ လက်လှမ်းမှီသလောက်ဖတ်နေတာရယ် ၊ ဆေးခန်းမှာ ကူလုပ်ပေးနေတာရယ်ကြောင့် ဒီလိုကိစ္စကိုရှက်စရာလို့ မထင်တော့ဘူး ။ ညီမတို့လို့ လူငယ်အရွယ်လေးတွေက ရှက်ကြတာ များတယ်လေ ။ ဒါကြောင့်ပါ ။ ဟုတ်ပါတယ် မိုးစက်ပြောသလိုပါပဲ ။ မိန်းကလေးအများစုက အလှပကိုအလေးထားပေမယ့် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုကျတော့ ဒီလောက်ကြီး လိုက်မလုပ်ဖြစ်ဘူး ။ တချို့ဆို မျက်နှာလေးတွေက မှုန်နေအောင်ခြယ်ထားတယ် ဘေးဖြတ်လျှောက်တော့ ချိုင်းချွေးနံကမွန်ထူလို့
ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် ရှက်စရာလို့မမြင်ပါဘူး ကိုAKKOရေ
ဂရုတစိုက်နဲ့ သွန်သင်လမ်းပြပေးရင် ကိစ္စမရှိပေမယ့် အမေနဲ့သမီးကြားပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ဒီလိုစာမျိုးလိုအပ်ပါတယ်
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ …
သို့သော် သဘောတရားရေးရာကျတော့ နည်းနည်းအားနည်ပါတယ်။
ဒေါက်တာရဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ် ။နောက်တခုတောင်းဆိုချင်တာက
တားဆေးတွေသုံးစွဲသူတွေအတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များကို ရေးစေချင်ပါတယ်။
အခုပေါ်နေတဲ့ pill72 လိုဆေးတွေကအစပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆေးတွေသိပ်နားမ
အဖြူဆင်းတဲ့ ကိစ္စကတော့ တော်တော်ကို ပြည့်စုံသွားလို့ ကျေးဇူးပါ။
ဆရာထက်ဝေးရေ မီးယပ်ရောဂါအတွက် အိမ်သုံးတိုင်းရင်းဆေးကတော့ သွေးဆေးပေါ့လေ ။ အိမ်တိုင်းလိုလို ဆောင်ထားတတ်တဲ့ တိုင်းရင်းဆေးမျိုးပါပဲ ။
တားဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ အရေးပေါ်တားဆေးတွေရဲ့ ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုး လေးတွေကိုလည်း ယေဘုယျရေးဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ် ။ စာတွေဖတ်ပြီး ပါဝင်အားဖြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေဗျာ ။
ဗဟုသုတ တိုးစေတဲ့ ပိုစ့်လေးပါပဲ ဒေါက်တာရေ …..
နောက်ထပ်လည်း ဒီလို ပိုစ့်လေးတွေရေးပြီး လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါဦးနော်
အခုလည်း သိထားရမယ့် အချက်တွေပါလို့ ပရင့်ထုတ်ပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်
ခုလို အမျိုးသမီးတွေ ဟိုဒင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေသိခွင့်ရတဲ့အတွက်
နောင်များအခွင့်ခါကြုံကြိုက်လျှင် လိင်တူချစ်သူတွေ ဘာဒင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလည်း
နွယ်ပင်ရေ နဂိုကတည်းက ချောပြီး လှပြီးသား မိန်းကလေးမို့ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအားပါ ထည့်ပေါင်းလိုက်လျှင် ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားမယ်ထင်ပါတယ် ။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုခင်ဗျာ လိင်တူချစ်သူတွေ ဘာဒင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလည်း ရေးပေးဦးမှာဆိုတော့ စောင့်ဖတ်ပါခင်ဗျာ
ဆရာဝန်ကြီးရေ၊ အားပေးစွာဖြင့်၊ အလေးထားရပါသဗျား။
ကျုပ်ကအရွယ်ကလေးအတန်ရလာတော့၊ အထူးကုတွေ၊ အတော်ကြုံဖူးပါသဗျား၊ သူတို့က စစ်ဆေး၊စမ်းသပ်
လူနာကို မေးမြန်း၊ လိုအပ်ရင် ချက်ကပ် လုပ်ခိုင်း၊ ပြန်စစ် ဆေးပေး သည်လောက်ပဲ လုပ်ကြတာကလား၊
ဖြစ်နေတာဘာ၊ ဘယ်လိုနေထိုင်ပုံပြောင်းရမယ်၊ ရေရှည်အတွက်အစားအစာ လိုပ်ဖ်စတိုင်ဘယ်လိုသွား ရမယ်၊ ပေးတဲ့ဆေးတွေက၊ဘာနဲ့တော့ဓါတ်မတည့်ဘူး၊ဘယ်လိုတိတိကျကျသောက်သင့်တယ်၊ဆိုတာတွေ၊ အသိပေး တာမရှိသလောက် နီးနီး တွေ့ရပါတယ်၊ တစ်ချို့အသဲမှာအဆီစဖုံးလာရင်၊ သွေးကြောထဲ ကိုလက်စထရောရှိလာရင်၊ဆေးအရရော၊နေထိုင်စားသောက်ပုံပါပြောင်းဖို့ တိုက်တွန်းပညာပေးသင့်ပါလျှက်
သောက်ဆေးကလေးသာပေးနှစ်ခါလေက်ပြန်ချိန်းပြီးကရောလုပ်လို့၊၊ နောင်အဲသည်လူနာ သွေးချို ဖြစ်ဘို့ အသင့်ဖြစ်နေတာ မသိခဲ့ရလို့၊ မကာကွယ်နိုင်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေအတွက်၊သည်လိုပညာပေးဆရာဝန်ကြီးတွေများများပေါ်ပေါက်ပါစေခင်ဗျား။
ကို ba gyi ဆုတောင်းပြည့်မှာပါ။ နောင်လည်း အားပေးပါဦးနော်။
ba gyi ကို အားပေးခိုင်းတာလားဟင် … သူ့အမျိုးသမီး ဖတ်ဖို့
Panty Liner သုံးခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးလဲ အချိန်ရရင်ပြောပြစေချင်ပါတယ်။ အဖြူဆင်းတတ်တဲ့အချိန်အတွက် အဆင်ပြေပေမဲ့ အမြဲသုံးဖို့ကြကောင်းပမလားပေါ့။
shwe ei ရေ ဆင်းတဲ့ အချိန်ပဲ သုံးပါ။ အမြဲသုံးရင် မကောင်းဘူးလို့ ပဲ အကြံပြုပါရစေ။